Niaraka Niresaka Momba Ny Lasa Sy Ny Ankehitriny Tao Amin’ny Twitter i Amerika Latina sy Espaina Nandritra Ny Andron’i Christophe Colombe · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Oktobra 2015 2:22 GMT
Vakio amin'ny teny English, عربي, Italiano, Español
Miteraka adihevitra ao amin'ny aterineto sy ivelan'ny aterineto ny datin'ny 12 Oktrobra, tsaroana mahazatra toy ny andro nahatongavan'i Christophe Columbe tao Amerika tamin'ny taona 1492. Mifanohitra sy mifanojo ny fomba fijery amin'izany: maro ny mankalaza ny fahatongavana izay hitan'izy ireo fa fanavaozana ny kaontinanta, raha manohitra kosa ny hafa ary mahita izany toy ny fanombohan'ny fandrobàna ara-toekarena, izay mbola hita ankehitriny ny voka-dratsiny.
Na izany aza, tsy avy amin'ny Amerika Latina ihany ny fanehoan-kevitra: mpiserasera Espaniola maro ihany koa no manao fihetsiketsehana manohitra ny fankalazana ny andro Hispanika, izay nitranga tamin'izany andro izany ihany. Niatrika fanafihana manohitra ny governemanta sy ny fitsipahana ny lovan'ny fanjanahantany ny tontolon'ny Twitter Iberika .
Tamin ‘ny farany, nampifandray ny fanehoan-kevitra ny zavatra iray iombonana, dia ny diezy milaza fa tsy misy zavatra ankalazaina ny 12 Oktobra #nadaquecelebrar.
Tsy mankalaza ny Fandripaham-bahoaka aho #nothingtocelebrate #DayofCulturalDiversity
#ColumbusDay (Ara-bakiteny “Andron’ ny Foko”) sambany vao hitan'ireo mpanjanaka mpanimba sasany izay nanafoana ny fomban-drazanay, finoanay, kolontsainay sy ny harenanay #Nothingtocelebrate
#nothingtocelebrate ary inona no maha samy hafa ny ankehitriny sy ny 600 taona lasa? Iray ihany izany na ratsy kokoa aza fa lasa any ampitan-dranomasina ny harenanay sy ny loharanon-karenanay
Nanaraka ny diaben'ny fiarahamonina Mapuche izay nifidy ny 12 Oktobra ho daty hanamafisana ny fitakian'izy ireo ao Santiago, Shily ny Azkintuwe, gazety ao amin'ny firenena Mapuche:
Narahan'ny gazety Shiliana El Observatodo, izay nanazava ny fitakian'ny vondrona tamin'ny antsipirihany kokoa ny diabe.
Mitaky indray ny tany norobaina, ny zon'olombelona ho amin'ny fizakan-tena ary indrindra indrindra fampitsaharana ny fanomezana rafitra ara-miaramila ao amin'ny faritra Araucania – ireo no olana noresahana tamin'ny diabe farany nataon'ny fijoroan'i Mapuche. Nandritra ny fihetsiketsehana, niampanga ny governemanta ireo mpikarakara -fa amin'ny fiarovana ny tombontsoan'ny mpandraharaha goavan'ny fitrandrahana ala, manohy “maka an-keriny ny tanin'ny vahoaka Mapuche, manafoana ny tolon'izy ireo ary manameloka ny fitakian'izy ireo” ny governemanta.
Mavitrika indrindra ny sampam-baovao iombonana Meksikana Desinformémenos. Tao amin'ny kaonty Twitter-n'izy ireo, nizara hafatra marobe manasongadina ny tena olana izy ireo eny fa na ankehitriny aza, mbola iharan'ny famindra-toerana sy ny fanaovana an-jorom-bala ny fiarahamonina teratany manerana ny faritra maro ao Amerika Latina .
DeRedes #Nothingtocelebrate. 1492. Mbola maro ny zavatra mila atao.
Nampiasa ny sariitatr'ilay Kolombiana Beto Barreto ihany koa ny fikambanana mba hisarika ny saina manoloana ny tsindry ara-toekarena sy ara-kolontsaina izay heverin'ny maro fa mahatonga ny fibodoan'ny tafika vahiny ny firenena Amerika Latina :
Amin'ny fitodihana ny lasa, niteraka tsy fahafaliana ny resaka izay nanasongadina ny fahasarotan'ny adihevitra; ho an'ny fiaraha-monina sasany sy ny fiarahamonina mestiza, taorian'ny taona maron'ny herim-pitaomana, ny fifindra-monina sy fitambarana ara-poko, mety ho sarotra ny manasaraka ny singa mampiavaka ny kolontsaina iray iombonana:
@LuisCarlos ny vazimba teratany ihany no afaka manao fitsarana azo hajaina momba izany. Tsy nisy isika ambiny raha tsy nisy ny 12 Oktobra.